Ku saabsan Dugsiyada Hoose ee Muuqaalka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiga Hoose ee 'Scenic Heights': Dugsi afar xiddigle ah
Waxaan ku suganahay Minnetonka, Minnesota oo ku taal bangiyada Purgatory Creek Preserve. Goobtani quruxda badan waxay ardayda iyo shaqaalaha u oggolaaneysaa inay ku raaxeystaan barashada deegaanka, fasalo waxbarasho jimicsi, iyo madadaalo u dhow kaynta, balliyada, iyo waddooyinka. Waxaan nahay guriga caanka ah ee caanka ah ee 'Scenic Heights', oo ah meel lagu farxo xilliga qaboobaha.
Waxaan caan ku nahay manhajkeena udub dhexaadka u ah ardayda iyo hanashada heer sare ee akhriska iyo xisaabta. Mid ka mid ah yoolalka dugsigeennu waa abuurista arday karti iyo hal abuur leh. Tani waa guriga Navigator, daabacaadda ardayga ee u dabaaldegeysa qorista. Heerarka 'Scenic Heights' waxay kaloo bixisaa "gacan-ku-hayn" barashada cilmiga, caafimaadka iyo cilmiga bulshada. Ardaydu waxay ku kobcaan fasalada usbuuclaha ah ee farshaxanka, muusikada, warbaahinta, iyo jimicsiga jirka. Fanaaniinta ardayda waxay bilaabaan waaya aragnimada qalab ee fasalka 4aad (orkestra) iyo fasalka 5aad (band). Waxaan sidoo kale bixinnaa barnaamijyo waxbarasho oo gaar ah, oo ay ku jiraan waxbarashada gaarka ah iyo adeegyada hibada iyo hibada leh.
Ardayda ku nool Heerarka Qurxoon waxay ka faa'iideystaan tikniyoolajiyad waxbarid heer sare ah. Fasal kastaa wuxuu heli karaa kombuyuutarro iyo telefishan wareegsan. Macallimiinteena fasalka dhexe waxay u adeegsadaan looxro cad cad oo is dhexgal ah barashada maalinlaha ah. Subax kasta, ardaydayada fasalka 5-aad waxay u gudbiyaan wararka dugsigeenna fasal kasta oo ka yimaada istuudiyahayaga wax soo saar, KRTS. Khabiirradeenna Warbaahinta waxay siisaa asal aad u wanaagsan ardayda xagga akhriska iyo akhrinta macluumaadka.
Shaqaalaheena waxaa ka go'an la kulanka baahiyaha bulsho iyo shucuureed ee caruurta. Waxaan haynaa barnaamij dhameystiran oo loogu talagalay waxbarashada dabeecadda (Tirinta Carruurta), dhexdhexaadinta asxaabta, iyo barashada adeegga. Caruurta waxaa la baraa qiimaha xalinta dhibaatooyinka iyo isku dhacyada si xilkasnimo leh. Macallimiinteennu waxay si adag uga shaqeeyaan dhisidda bulshooyinka fasalka ku dhex jira oo xoog leh, daneeya Waxaan nahay Bog Nabadeed Caalamiya oo loogu talagalay sanad walbana waxaan ugu dabaaldegnaa Beerteenna Nabadda.
Waxaan qadarinaynaa kaqeybgalka waalidka. Waalidiintu waa kaqeybgalayaasha muhiimka ah ee hadaf u dejinta arday kasta. Waxaan leenahay Ururka Waalidiinta Macallimiinta firfircoon (PTA), oo siiya fursado badan tabaruceyaasha, dhacdooyinka qoyska, iyo taageerada dugsiga. Waxaan aaminsanahay inaan nahay bahwadaag siinta waxbarashada ugu fiican ee suuragalka u ah caruurteena.
Bulshadda Dhexdeeda waa goob aan caadi ahayn: Mid si diiran u soo dhoweysa una soo dhoweysa qof walba. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad na soo booqato